Bafuna imicimbi yeziqu emanyuvesi - Ilanga News
Home Izindaba Bafuna imicimbi yeziqu emanyuvesi
Bafuna imicimbi yeziqu emanyuvesi
Ukwethweswa bukhoma abafundi iziqu kugcine ngo-2019
IZITSHUDENI ezikhungweni zemfundo ephakeme zilindele ukugqokiswa bukhoma kulo nyaka imiyezane
BAYIFUNA ngenkani imicimbi eyenziwa bukhoma yokwethweswa kwabafundi iziqu ezikhungweni zemfundo ephakeme kusukela kuMbasa (April)- okuyinyanga okujwayele ukwethweswa ngayo iziqu kwizitshudeni. Lokhu kuvezwe uMengameli we-Southern African Union of Students (SAUS) kuzwelonke uMnu Moses Nkambako. Uthi sebethole izikhalazo kumaStudents Respresentatives Council (SRC), zokuthi izikhungo zifuna ukungayenzi nakulo nyaka imicimbi eyavalwa ngo-2019, ngenxa yokhuvethe.
Utshele ILANGA ukuthi ngeke bakuvumele lokho ngoba basola ukuthi sekuyindlela yokongiwa kwezimali emanyuvesi ngokulimaza injabulo yabafundi. Phakathi kwezikhungo eziphumele obala zithi nakulo nyaka umcimbi weziqu uzokwenziwa online, yi-Durban University of Technology (DUT), kanti e-University of Western Cape, nase-University of Cape Town, wenziwe bukhoma umcimbi kusukela ngenyanga edlue. UMnu Nkambako uthi sebeqalile ukwenza izingxoxo namanye amanyuvesi, bephikisa izinqumo zawo.
“UMengameli wezwe uMnu Cyril Ramaphosa, ukhulume emasontweni adlule, wathi sezingandiswa nezibalo zabantu emicimbini eyenziwe ngaphakathi neyenziwa ngaphandle. Zihlulwa yini izikhungo zemfundo ephakeme ukwenza le micimbi ngoba ukuvinjwa kwayo kulimaza injabulo yabafundi nokujabulisa abazali babo emuva kweminyaka befunda kanzima,” kusho uMnu Nkambako. Uthi uma kuthweswa abafundi iziqu, kwenziwa ngokwehlukana kwemikhakha okwenza silawuleke isibalo sabafundi abathweswa iziqu.
Uveze ukuthi bazolusukumela lolu daba. “Izitshudeni ziyakwazi ukulandela imigomo ebekiwe yokuzivikela. Lana sikhuluma ngabantu
abadala, abafundile, abanye babo benza ngisho ucwaningo olunzulu emikhakheni ehlukahlukene, lokho kusho ukuthi bakhulile ngokomqondo. “Ivinjwa kanjani imicimbi yeziqu ngoba e-University of Zululand, kuqalwe unyaka babuyiselwa bonke abafundi emakilasini, eMangosuthu bebebhaliswa, besizwa ngaphakathi esikhungweni,” kusho uMnu Nkambako.
Okhulumela iDurban University of Technology (DUT), uMnu Alan Khan, uthi ukuthweswa kweziqu kuzoqala online mhla ka-13 ku Nhlaba (May) ngomkhakha wakwa Accounting and Informatics, Faculty of Engineering and Built Environment, bese mhla ka-16 kuqale isigaba sesibili okuzoba yiFaculty of Management Sciences, Faculty of Arts and Design kuvalwe nge Applied Sciences. Uthi uhlelo lokugonywa luyinselelo kakhulu, yilona olwenze ukuba umkhandlu uthathe izinqumo zokuthi kulandelwe lona.
Utshele ILANGA ukuthi ukhuvethe alukapheli, ngakhoke aluyivumeli inyuvesi ukuthi yenze umcimbi wokuthi bathweswe iziqu bukhoma abafundi. Okhulumela iMangosuthu University of Technology (MUT), uNkz Mbali Mkhize, uthi umkhandlu awukasithathi isinqumo kanti uNkk Gcina Nhleko, wase-University of Zululand (Unizul), uthi kusagodliwe okwamanjengoba kuzokwenzeka. UNkk Nomarh Zondo, wase-University of KwaZulu-Natal, uthe kusazomenyezelwa okuzokwenzeka. mthobisis@ilanganews.
Previous articleKUZOXEGISWA IMITHETHO EHAMBISANA NOKHUVETHE
Next articleUgeqa amagula ngokuhlangana neSilo